कुरुक्षेत्रमा भएको चर्चित महाभारत युद्धको बास्तबिक रहस्य के थियो ? | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
कुरुक्षेत्रमा भएको चर्चित महाभारत युद्धको बास्तबिक रहस्य के थियो ?
२०७७ जेष्ठ ३०, शुक्रबार १३:१६:००
महाभारतका कालमा भएको महाभारत युद्धलाई कुरुक्षेत्र युद्ध पनि भन्ने गरिएको पाइन्छ जुन कुरु साम्राज्यले हस्तिनापुरको राजसिंहासन प्राप्त गर्न सहोदर दाजुभाईका सन्तान कौरव र पाण्डव बीच लडिएको अत्यन्त नाम चलेको ऐतिहासिक युद्ध थियो। महाभारत ग्रन्थका अनुसार भारतका प्रायः सबै महाजनपदहरूले यस युद्धमा भाग लिएका थिए। महाभारत र अन्य वैदिक साहित्यका अनुसार यो प्राचीनतम् भारतबर्षको वैदिककालीन इतिहासको सबभन्दा ठूलो र चर्चित लडाइँ थियो।
हाल उत्तर भारतको हरयाणा राज्यको शहर कुरुक्षेत्रमा भएको महाभारत युद्धमा लाखौं क्षत्रिय कुशल योद्धाहरू मारिए जसको परिणामस्वरूप वैदिक संस्कृति र सभ्यताको पतन भयो। सम्पूर्ण भारतका राजाहरू बाहेक अरू धेरै देशका क्षत्रिय नायकहरूले पनि यस युद्धमा भाग लिए र सबैले वीरगति प्राप्त गरे। यो युद्धको परिणाम स्वरूप, भारतसँग ज्ञान र विज्ञान र वीर क्षत्रिय दुबैको अभाव हुन गयो ।
एक किसिमले, विकासको चरममा रहेको वैदिक संस्कृति र सभ्यता अचानक एकाएक नष्ट भयो। प्राचीन भारतको सुनौलो वैदिक सभ्यता यो युद्धको अन्त संगै समाप्त भयो। यो महान् युद्धको वर्णन त्यस समयका महान् ऋषि एवम् दार्शनिक भगवान वेद व्यासले आफ्नो महाकाव्य महाभारतमा गरेका थिए जुन सहस्राब्दीसम्म सम्पूर्ण भारतमा गाउँदै र सुन्नबाट स्मरण गरिन्थ्यो।
महाभारतमा मुख्य रुपमा चन्द्र वंशका दुई परिवारहरु कौरव र पाण्डवहरुका बीच युद्धको विवरणहरु छ। १०० भाइ कौरव र पाँच भाइ पाण्डव बीच कुरु साम्राज्यको भूमिको लागि भएको संघर्षले अन्ततस् महाभारतको युद्ध निम्त्यायो। उक्त युद्ध हरियाणाको कुरुक्षेत्रको आसपास भएको थियो भन्ने विश्वास छ। यस युद्धमा पाण्डव विजयी भएका थिए। महाभारतमा यो युद्धलाई धर्मयुद्ध भनिएको छ, किनकि यो युद्ध सत्य र न्यायको लागि लडिएको थियो। महाभारत कालसँग सम्बन्धित धेरै अवशेषहरू दिल्लीको पुरान किलामा भेटिन्छन्।
पुराना किलालाई पाण्डवहरूको किल्ला पनि भनिन्छ। महाभारत कालका हतियार र भालाहरू पनि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण भारतीय ले कुरुक्षेत्रमा प्राप्त गरेको थियो। गुजरातको पश्चिम तटमा डुबेको ७०००-३५०० वर्ष पुरानो शहर खोजिएको थियो जुनको उल्लेख महाभारतमा द्वारका वर्णन गरिएको छ साथै बरनावामा लाक्षागृहको अवशेष भेटिएको छ। यी सबै प्रमाणहरूले महाभारतको यथार्थ वास्तविकतालाई प्रमाणित गर्दछ।
महाभारत युद्धको मुख्य कारण कौरवहरूको उच्च महत्वाकांक्षा र धृतराष्ट्रको पुत्रप्रति अन्धमोह थियो । कौरव र पाण्डव दाजुभाइ थिए। वेदव्यासद्वारा अम्बिकाको गर्भबाट धृतराष्ट्र र अम्बालिकाको गर्भबाट पाण्डुको जन्म भएको थियो। धृतराष्ट्रले उनका गन्धारीको गर्भबाट सय छोरालाई जन्म दिएका थिए,उनीहरूमा दुर्योधन जेठो थियो । पाण्डुका पाँच छोरा, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव थिए। धृतराष्ट्र जन्मदेखि नै अन्धा थिए, त्यसैले उनको स्थानमा पाण्डुलाई राजा बनाइयो , जसले गर्दा धृतराष्ट्रलाई सधै पाण्डु र उनका छोराहरू माथि द्वेष रहन गयो ।
यस्तैमा शिकार खेल्न जंगलमा गएको बखत राजा पाण्डुले रानी माद्र्र्रीसंग रतिक्रिडा गर्ने क्रममा मृत्यु भएपछि राजगद्दीमा अन्धा धृतराष्ट्र बस्न थालेपछि उनका जेठा छोरा दुर्योधन र उनका मामा शकुनीले यस द्वेषको आगोमा घीउ थपे जुनपछि गएर दुइ्र्र परिवारमा आपसी दुर्भाव झनै बढ्यो। कुटिल चाल चल्न सीपालु शकुनीको प्रभावमा उनको भान्जा दुर्योधनले बाल्यावस्थादेखि नै पाँच पाण्डबलाई मारेर एक छत्र सत्ता चलाउन लाक्षागृह लगायत थुप्रै षडयन्त्रहरू गर्यो । तर हरेक पटक ऊ असफल भए।
जब कुलको जेष्ठ पुत्रको आधारमा युधिष्ठिरलाई राजकुमार बनाइयो, दुर्योधनले लक्षागृहमा पठाएर उनलाई मार्न खोजे तर पाण्डवहरू भने बाचेर उम्कन सके । पाण्डवहरूको अनुपस्थितिमा धृतराष्ट्रले दुर्योधनलाई राजकुमार बनाए तर जब पाण्डवहरू फर्किए र आफ्नो राज्य फिर्ता खोज्न थाले, उनीहरूलाई राज्यको नाममा खण्डहर भूमि खण्डव वन दिइयो। धृतराष्ट्रको अनुरोधमा युधिष्ठिरले गृहयुद्धको खतराबाट बच्न बच्नको लागि यो प्रस्ताव स्वीकार गरे। पाण्डवहरूले श्री कृष्णको सहयोगमा इन्द्रको अमरावती पुरीको भव्य शहर इन्द्रप्रस्थ बनाए।
पाण्डवहरूले विश्व विजय गरेर प्रचुर मात्रामा रत्न र पैसा संकलन गरे र राजसुय यज्ञ गरे। दुर्योधनले पाण्डवहरूको प्रगति देख्न सकेनन् र शकुनीको सहयोगमा उनले युधिष्ठिरबाट जुवाको खेलमा छलद्वारा उनको सम्पूर्ण राज्य जिते र दुशाशनले कुरु राज्य सभामा द्रौपदीलाई निर्वस्त्र गर्ने प्रयास गरेर द्रौपदीको अपमान गरे। सम्भवतः महाभारत युद्धको बीउ यस दिन नै खसेको थियो। अन्त्यमा, फेरि हराएपछि, पाण्डवहरूले १२ बर्षको बनवास स्वीकार्नु पर्‍यो र १ बर्षको लागि गुप्तवास स्वीकार गर्नुपर्यो । तर यो शर्त पूरा गरेपछि पनि कौरवहरूले पाण्डवहरूलाई उनको राज्य दिन इन्कार गरे। त्यसकारण पाण्डवहरूले लडाई गर्न वाध्यतावश खडा गर्नु परेको थियो, तर श्री कृष्णले युद्ध रोक्न सबै सम्भव हुने सुझाव दिए।
महाभारत युद्धमा श्रीकृष्ण र अर्जुन
त्यसपछि श्री कृष्ण पाण्डवको तर्फबाट कुरु राज्य सभामा शान्तिदुतका रूपमा गए र त्यहाँ कृष्णले दुर्योधनलाई पाण्डवहरूलाई केवल पाँचवटा गाउँ दिएर युद्ध रोक्न प्रस्ताव गरे। तर जब दुर्योधनले पाण्डवहरूलाई सियोको टुप्पो जत्तिकै जमिन पनि दिन इन्कार गरे, युधिष्ठिर अन्ततः युद्ध गर्न बाध्य भए। यसरी कौरवले ११ अक्षौहिणी र पाण्डवले ७ अक्षौहिणीह सेना एकत्रित गरे। युद्धको तयारी पूरा गरिसकेपछि कौरव र पाण्डव दुबै कुरुक्षेत्रमा पुगे, जहाँ यो भयंकर लडाई भयो। कुरुक्षेत्रको त्यो भयानक र भयंकर विनाश युद्धको अनुमान महाभारतको भीष्म पर्वको एउटा श्लोक बाट लगाउन सकिन्छ।
न पुत्रः पितरं जज्ञे पिता वा पुत्रमौरसम्।
अर्थात् स् त्यस युद्धमा न पुत्रले पितालाई, न पिताले पुत्रलाई चिने, न भाइले भाइलाई, न काकाले भतिजालाई, न साथीले साथीलाई चिने।’